လုပ်ငန်းသုံးယဉ် အသစ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Changan Clark Iveco Suzuki Zhong Tong
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1988 1987
Changan Star Van22014
Automobile Alliance Pre-Owned
White Changan Star Van22014 for sale. The comfort features include A/C: Front. The sound system includes Cassette Radio. To get more information on this car, you can ask questions to the car o...
The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
Iveco 682 Heavy Duty Dump Truck 2016
Iveco 682 Heavy Duty Dump Truck 2016 for sale. DimensionWheelbase - 3.825Maximum Length - 8.200Max Width - 2.500Overall Height - 3.500WeightPayload(kg)@GVW - 18.190Body DimensionLength x Width x...
Iveco Power Daily Mini Bus 19 Seaters
White 2016 Iveco Power Daily Mini Bus 19 Seaters -Italy for sale. DimensionWheel Base	- 4180WeightsGVW	- 5000Kerb Weight Total - 3350Max Body & Payload Capacity - 1650EngineTotal Displacement - 2...
Iveco Power Daily Van V36 2016
Iveco Power Daily Van V36 2016 Italy for sale.DimensionWheel Base	- 2800Maximum Length	- 4845Max Width	- 2000Cargo AreaInternal Length	- 2460Internal Width	-1800Internal Height - 1650Capacity	- ...
Zhong Tong Compass Express Bus
Red 2014 Zhong Tong Compass Express Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
Iveco Astra HHD9 2016
Iveco Astra HHD9 2016 for sale.Iveco Cursor 13 Euro 3Payload - 40 TonEngine - 480hp@1900rpmGVW - 63 Tons Italy BrandMax Power - 353kw
Red 2014 Zhong Tong Navigator Express Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
Zhong Tong Airport Bus
White 2014 Zhong Tong Airport Bus for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
Iveco Power Daily Van V50 2016
Iveco Power Daily Van V50 2016 Italy for sale.DimensionWheel Base	- 3950Maximum Length	- 6880Max Width	- 2000Cargo AreaInternal Length	- 4400Internal Width	-1800Internal Height - 1900Capacity	- ...
Iveco Power Daily Mini Bus 19 S...
Orange 2014 Iveco Power Daily Mini Bus 19 Seaters -Italy for sale. DimensionWheel Base	- 4180WeightsGVW	- 5000Kerb Weight Total - 3350Max Body & Payload Capacity - 1650EngineTotal Displacement ...
Iveco Power Daily Van V42 2016
Iveco Power Daily Van V42 2016 Italy for sale.DimensionWheel Base	- 3310Maximum Length	- 5990Max Width	- 2000Cargo AreaInternal Length	- 3615Internal Width	-1800Internal Height - 1900Capac...
Lks 100 အစိုးရအခွန်အခများပါဝင်ပြီး
ကားအရမ်းသန့် မန်းကုမဏ္ဏီ အော်တို ပါဝါ အေစီ ၄ဝှီး
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အသစ်များ
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အမျိုးမျိုး အသုံးပြုမှုဟာ မြန်မာပြည် နေရာ အနှံ့အပြားမှာ ရှိနေ ပါတယ်။ ယင်းထဲမှာမှ အသစ် နဲ့ အဟောင်း အမျိုးအစား ခွဲခြားထားရင် အသစ် အရေအတွက်က နည်းနေ ပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် ယနေ့မှာ ကား အသစ်များ တင်သွင်းခွင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်သလို၊ ကြားခံ ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ တိုက်ရိုက် ရောင်းချပေး တဲ့ တရားဝင် အရောင်းစင်တာတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွေ မြန်မာပြည်မှာ တကယ် လက်တွေ့ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ် အနေနဲ့ အသစ်ထဲမှာ ဆိုရင် ဖူဆို၊ ဗိုလ်ဗို၊ ကာတီပီလာ အပြင်၊ တရုတ်ပြည်က လာတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် အချို့များ ရှိနေ ပါတယ်။
ဟရွန်ဒေး ၊ ဒိုင်ဟက်စု ၊ နစ်ဆန်း တို့ကနေလည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။
အသစ် အမျိုးအစား များ
ဈေးအသက်သာ ဆုံး ကတော့ တရုတ်ဖြစ် ကားကြီး အသစ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးအကြီးဆုံး ကတော့ ဥရောပ ဖြစ် ကားကြီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ကို အမျိုးအစား ပြန်ခွဲရင် ထရက်ကား၊ ဆီမီ ထရက်ကား၊ ဗန်၊ ခရီးဝေး ဘတ်စ်၊ မြို့တွင်း ဘတ်စ်၊ တက္ကဆီ၊ နောက်တွဲ၊ ဘောက်စ်ထရက် ဆိုပြီးတော့ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဘတ်စ်ကား များကိုလည်း အသစ်များ တင်သွင်းမှု ရှိပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား နဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံများက ခရီးသွား အဆင့်မြင့် ဘတ်စ်ကား အသစ်များကို တင်သွင်းပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးတွေ အသိနည်းတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်များ များပြား ပါတယ်။ တက္ကဆီ မှာ ဆိုရင်လည်း တရုတ်ပြည်က ချယ်ရီ တွေဟာ အသစ်ကားများ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းအထိ လူကြိုက်များ အသွင်းများခဲ့ ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် စ ထွက်ထွက်ချင်း သိန်း ၁၅၀ ကျော်ပေမယ့် ယနေ့မှာ သိန်း ၈၀ နဲ့ ရောင်းရင်တော့ ဝယ်မယ့်သူ အတော်လေး ရှားတဲ့အထိ ဖြစ်သွား ပါတယ်။ ချယ်ရီရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကို တက္ကဆီ မောင်းသူတို့ မယုံကြည်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆ လ လောက် သုံးပြီးရင် အကြမ်းမခံတော့ပဲ အပျက်များတာကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း တရုတ် ချယ်ရီ တက္ကဆီကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့ တင်သွင်း ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ်ကလည်း ၁၀၀၀ စီစီအောက်မှာပဲ ရှိတာကြောင့် ဆီစား သက်သာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များကို မှာယူ ပေးတဲ့ ကြားခံ အေးဂျင့်တွေက ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်၊ တရုတ်နယ်စပ် တို့ကနေ တင်သွင်းပေးမှု များပြားပြီး ဂျပန်ကနေ သွင်းတာ၊ ဥရောပကနေ သွင်းတာတွေ ကိုတော့ ကွန်တိန်တာ၊ ကားတင် သင်္ဘောများနဲ့ သွင်းပါတယ်။ အသစ်များ ဖြစ်တာကြောင့် ဈေးကလည်း အဟောင်းကားများထက် ကြီးတာ သဘာဝပါပဲ။ အခွန်အခအားဖြင့်လည်း ကြီးပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သိန်း ၅၀၀၀ အထက်မှာ ငွေရှိရင် အသစ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် တစ်စီး ရနိုင် ပါတယ်။ motors.com.mm လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အသစ် အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။